» मेरो कार्यकालमा नगरपालिकालाई देशैभर चिनाउँछु : मेयर खड्गबहादुर खत्री
मेरो कार्यकालमा नगरपालिकालाई देशैभर चिनाउँछु : मेयर खड्गबहादुर खत्री
२०७६ फाल्गुन १३,मंगलवार १९:१४
सिन्धुली जिल्ला ऐतिहासिक महत्व बोकेको जिल्ला हो । विकासको दृष्टिकोणले पछाडी परेको मानिने यो जिल्ला संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि विस्तारै विकासमा बामे सर्दैछ । यसै सन्दर्भमा कमलामाई नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर खत्री यो नगरपालिकालाई हरेक हिसाबले विकसित बनाउन क्रियाशील भइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, तु खबरका समाचार प्रमुख बलराम पुडासैनी ले मेयर खत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्न : कमलामाई नगरपालिकाको तपाई मेयर हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले नेतृत्व गरेका थिए । तपाइको कार्यालयले जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवालाई कसरी सरल बनाउनु भएको छ ? जनतालाई गाउँमै सरकार आएको प्रत्याभूति भएको छ कि छैन ?
– धन्यवाद । निजामति कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले चलाएको सरकारमा हामीले तुलना गर्न सकेनौँ भने जनताले परिवर्तनकोे अनुभूति गर्न सक्दैनन् । त्यसैले हामीले हिजोभन्दा आज सहज ढंगले जनताले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ । हिजोको दिनमा एउटा सामान्य सिफारिस पाउन सेवागा्रहीलाई जुन खालको समस्या थियो, त्यो खालको समस्या आज छैन । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि स्थानीय तह बढी जिम्मेवार भएका छन् । धेरै अधिकार तथा जिम्मेवारीहरु वडामा नै दिइएको छ । कर्मचारीले गरेको काम सिधै जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा हुँदा सामान्य समस्या भने देखिएको छ, तर त्यो छिट्टै समाधान हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको कुरालाई लिएर जनताले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जनताले नगरपालिकाबाट पाउने सेवा–सुविधालाई सहज ढंगले प्रवाह गर्न र जनताको गुनासो नआउने वातावरण बनाउन मैले सबै कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएको छु । म जनताको सेवामा सदैव प्रतिबद्ध छु ।
प्रश्न : तपाई निर्वाचित भएर आएपछि नगरवासीहरुको मुख्य समस्याको पहिचान गर्नुभयो की भएन ? पहिचान गर्नुभएको छ भने के–क गर्नुभयो ? र त्यसको समाधानको लागि तपाइले के गरिरहनुभएको छ ?
– सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपालीको पहँुच सरल र सुलभ ढंगले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पुग्नुपर्दछ । त्यो मान्यता मँैले हिजो पनि बोकेको थिएँ र आज पनि बोकेको छु । सहज ढंगले स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनको लागि कमलामाई नगरपालिकाको १४ वटै वडामा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक पुगेको छ । स्वास्थ्यलाई अलि बढी गम्भीर विषयको रुपमा हामीले लिएका छौँ । अहिले कमलामाई नगरपालिकाले मोतियाबिन्दु, आङ खस्ने र हर्निया गरी तीन वटा रोगको उपचार गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । हामीले पत्येक स्वास्थ्य चौकीमा सरकारले दिएको निशुल्क औषधी पाइएन भन्ने गुनासो हुनुभएन भरेर काम गरिरहेका छौँ । सबै वडामा स्वास्थ्य शिविर गर्नुपर्छ भनेको छु । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा हामी गम्भीर छौँ । यस नगरपालिका भित्र धेरै स्कुलहरु थिए । शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनको लागि यहाँका केही स्कुलहरु मर्ज गरिए र अहिले पनि कमलामाई नगरपालिकामा ९७ वटा स्कुल छ । यी स्कुलहरु सुधार गर्नको लागि नगरपालिकाले प्रयास गरिरहेको छ । हामीले बाल क्लासको शिक्षक नभएको ठाउँमा बालक्लासको शिक्षक, निमावि शिक्षक नभएको ठाउँमा निमावि शिक्षक, मावि शिक्षक नभएको ठाउँमा मावि शिक्षक पठाएका छौँ । सँगसँगै शिक्षकहरुलाई तालिम पनि अत्यन्तै राम्रोसंग उपलब्ध गराइरहेका छौँ । हामीले तीन जनालाई शिक्षक सहजकर्ताको रुपमा राखेका छौँ । मासिक रुपमै शिक्षकले तलब खाएका छन् । उनीहरुलाई आईसिपीसम्बन्धी तालिम र प्रअको तालिम दिनेखालको काम गरिरहेका छौँ । हामी धेरै राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । सबै पूर्ण त छैन, विस्तार हुँदैछ ।
त्यस्तै नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हाम्रो ध्यान त्यता पनि छ । किसानहरुले बारी बाँझो राख्ने अनि तरकारी र अन्न किन्ने गरेका छन् । हामीले किसानहरुलाई अब जमिन बाँझो नराख्नुस्, हामी समृद्ध हुनुको लागि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, पहिला खान पाउनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । कृषि क्षेत्रलाई अत्यन्तै प्राथमिकता पनि दिएका छौँ । अहिले हामीले बाहिरको दूग्ध, मासु ल्याउनुपर्दैन । नगरपालिका क्षेत्र अहिले च्याउँ खेतीमा आत्मनिर्भर छ । अरु तरकारीमा पनि लगभग अरु नगरपालिकाभन्दा कमलामाई नगरपालिका धेरै अगाडि छ । आगामी दिनहरुमा यस नगरपालिकाभित्र तरकारी आयात गर्नै नपर्ने हामी बनाउँछौँ । किसानहरुलाई कुलोको व्यवस्था गरिदिने, सिँचाई नभएका जमिनहरुमा सिँचाईको व्यवस्था गरिदिने अभियानमा छौँ ।
हामीले ‘नगरवासीको चाहाना उज्यालो नगरपालिका हाम्रो कामना’ भन्ने नारालाई सफल पार्नको लागि अबको २/३ महिनाभित्र कमलामाई नगरपालिकाभित्रका सबै गाउँटोलमा बिजुली पुर्याउने तयारी हाम्रो छ, पुग्छ पनि । हामीले टेन्डर गरेका छौँ, नगरपालिका भित्रका सबै खर–परालको छानाहरु अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छौं । पानी चुहिने घरमा अब जनता बस्नु पर्दैन । हामीले पहिला स्कुलबाट सुरु गरेका हौं । अहिले स्कुलभित्र बस्दा छाता ओडेर बस्नु नपर्ने भएको छ । अब केही समयभित्रै हामी नगरपालिकाभित्रका प्रत्येक घरमा खर–परालको छानो अन्त्य गर्ने छौँ ।
प्रश्नः नगरको समग्र विकासतर्फ यहाँहरुको योजना के छ ? सवै वडामा सडकको पहुँच पुगेको छैन, कहिले पुग्छ ?
– भौगोलिक दृष्टिकोणले यस नगरपालिका अत्यन्तै बिकट छ । म नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा पिच हुन्छ त भन्न सक्दिन तर, हाम्रो प्रयत्न र प्रयास के छ भने सकभर सबै ठाउँमा गाडी पुग्नुपर्छ १२ नम्वर वडा बाहेक सबै वडामा सडकको पहुँच पुगिसकेको छ । हामी १२ नम्वर वडामा पनि अब आउने बजेटबाट सडक पुर्याउने तयारीमा छौँ । लगभग हामीले ट्रयाक खोल्ने काम गरिसकेका छौं । ठाउँ–ठाउँमा हामीले पिचको कामहरु पनि गरिरहेका छौँ । अहिले पनि ९/१० करोडको काम भइरहेको छ । सिन्धुलीका धेरै ठाउँमा बैकल्पिक बाटोहरु खोलेका छौँ, कमलामाई नगरपालिका वडा नम्वर ८ बाट सिधै २ नम्वर प्रदेशको सर्लाही जिल्लामा पुग्ने बाटो खोल्यौँ ।
हामीले वर्षमा ८ देखि १० करोड बजेट पिचमा लगाएका छौँ । त्यसले मात्रै पर्याप्त छैन किनभने यस नगरपालिका देशकै पाँचौ ठूलो नगरपालिकामा पर्दछ । यो भौगोलिक हिसावले पनि निकै ठूलो छ । बजेट थपेर काम गर्नेछौँ ।
प्रश्नः बजेट विनियोजनको दृष्टिकोणले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नगरपालिकाले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो, आगामी बजेटमा प्राथमिकताका साथ कुन विषयलाई राख्नुभएको छ ? महिला, वालवालिका, जनजाती दलित अपाङ्ग आदि समुदाय र बर्गका जनतालाई लक्षित कार्यक्रम के छ ?
– कार्यक्रमको आधारमा बजेट होईन, आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । अहिले कमलामाई नगरपालिकाले वडा–वडामा गएर अपाङ्गको परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ । हाम्रो उपमेयरको नेतृत्वमा टोली गाउँ गाउँमा पुगिरहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हुइलचेयरको व्यवस्थापन गरेका छौँ । त्यस्तै बालबालिकाको हकमा हामीले कुनै पनि बालकालिका आर्थिक अभावका कारण स्कुल जानबाट बञ्चित नहोस् भनेर प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था भए गर्ने गरिनै रहेका छौँ । अझै पनि छुटेका छन् भने कृपया जानकारी दिनुहोला हामी त्यस्ता बालबालिकालाई चाहिने कपडालगायत स्टेशनरी सामग्री सबै उपलब्ध गराउँछौँ ।
पोहोर पनि मैँले ७५ जनालाई स्टेशनरी सामाग्री वितरण गरेको थिएँ । यस वर्ष पनि हामीले ८० जनालाई एक वर्षसम्म पुग्ने गरी स्टेशनरी सामाग्री वितरण गरेका छौँ । महिला बालबालिकाको हक अधिकारको विषयमा पनि हामी गम्भीर छौँ । गत वर्ष ८० जना दलितहरुलाई ३ महिने कम्प्यूटर तालिम दियौँ , यो बर्ष पनि उहाँहरुले चहाना राख्नुभयो भने कम्प्यूटर डिप्लोमा तालिमसम्मको तालिम दिनेछौँ । जनजातिहरुलाई लोकसेवा तयारी कक्षाको लागि निशुल्क पढायौँ । कमलामाई नगरपालिकाले महिला हिंसामा परेका ७/८ जना महिलाहरुलाई सिलाई सम्बन्धी तालिम दिएको छ । म के भन्छु भने कोही पनि मानिस म शिप सिक्छु भनी निवेदन दिन आए नगरपालिकाले व्यवस्था मिलाउँछ ।
अहिले युवा स्वरोजगारको लागि नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यो पैसा हामीले तालिम लिएको भए प्रमाणपत्र, नलिएको भए तालिम लिने प्रबन्ध गर्ने र तालिम लिइसकेपछि बिना धितो, बिना व्याज ऋण दिने कार्यविधि बनाएका छौँ । उसले हामीलाई किस्ता तिर्नुपर्छ र जुन दिन उसले किस्ता तिर्दैन त्यो दिन उसले नगरपालिबाट पाउने कुनै पनि सेवा पाउँदैन । पैसाकै कारणले मैले कुनै पेशा व्यवसाय गर्न पाइन भन्ने नहोस् भन्न हामीले यो कार्यविधि बनाएका हौँ । कोही पनि मानिस मैले ८ घण्टा काम गर्न पाइन, मैले खान पाइन भन्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई नगरपालिकाले काम दिन्छ । काम चाँही गर्नुपर्छ ।
दिनभरी डुल्नी, चियाँ पसलमा बस्ने, अरुको कुरा काट्ने अनि बेलुका झोलामा खुर्सानी किनेर लैजाने अनि म बेरोजगार भएँ भन्नेहरुको पक्षमा म छैन ।
प्रश्नः यहाँले निर्वाचनको बेला गर्नुभएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा छन् ?
– कमलामाई नगरपालिकाको यही चैत्रमा स्थापना दिवस छ । यसबारे सोही अवसरमा म भन्नेवाला थिएँ तपाईले साध्नुभयो खुसी लाग्यो । मैले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको ६० प्रतिशत काम गरिसकेको छु र बाँकी काम गर्ने प्रयास पनि गरिनै रहेको छु ।
प्रश्नः तपाई तलब भक्ता पनि लिनुहुन्न, व्यवहारिक जीवन कसरी चलाउनुभएको छ ?
– नगरपालिकाले दिएको तलव सुविधाचाँही मैँले लिएको छु । तर, बाहिर सामाजिक काममा गएको भत्ता चाँही मैँले खुत्रुकेमा हालेको छु । म नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि नगरपालिकाले दिएको सेवासुविधा लिएको छु । म एउटा सामान्य किसानको छोरा हुँ । जीवन धान्न समस्या छैन ।
मैँले बाहिरको भत्ता चाँही लिएको छैन । किन भने मलाई नगरपालिकामा जिताएको नै नगरभित्रका जनताले हुन् । बाहिरबाट आउँने सबै भत्ता मैँले व्यक्तिगत नभई नगरपालिकाको खुत्रुकेमा हालेको छु । विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि मैँले एक रुपैयाँ पनि नगरपालिकाको पैसा चलाएको छैन । मैले सबैलाई भनेको पनि छु, अहिले समाजमा भ्रष्टाचार बढ्दैछ त्यसको अन्त्य हामी जस्ता जनप्रतिनिधिहरुबाट थालनी गर्नु पर्दछ । हामी आँफै राजनीतिमा लागेर जनप्रतिनिधि भएका हौं । यस कारण भ्रष्टाचारलाई हामी आफैले अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
प्रश्नः अन्य राजनीतिक दलको सहयोग कस्तो छ ?, विकासमा राजनीति भयो भन्ने गुनासो तपाइमाथि छ, आफ्नालाई मात्रै समेटिएको हो ?
– कमलामाई नगरपालिकामा १४ वटा वडा छ । मैले बजेट विनियोजन गर्दा लगभग सबै वडामा समान किसिमको व्यवहार गरेको छु । तर उपभोक्ता समितिहरु बन्दा कतै आग्रह–पूर्वाग्रह पनि देखियो । अहिले कमलामाई नगरपालिकाभित्रका प्राय वडामा उपभोक्ता समितिमा मानिसहरु बस्नै मान्दैनन् । किनभने मैले धेरै टाईट गरेको छु । ढलान गरेको ठाउँमा कैँचीले हान्नुस् र मोटाइ नाप्नुस् भनेर भनेको छु ।
मान्छेले आरोप प्रत्यारोप लगाउनु स्वभाविक हो, तर मँैले कमलामाई नगरपालिकाको प्रमुखको हिसाबले कोही नजिक, कोही टाढा भनेको छैन । म एक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएको आएको हुँ । मेरो दलप्रति इमान्दारिता र झुकाव हुनु स्वभाविक हो । त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु राजनीति गर्न पाइन्छ, तर विकासमा राजनीतिकरण गर्न पाँइदैन ।
राजनीतिक दललाई अहिलेसम्म औँला ठड्याउने मौका मैले दिएको छैन । अहिले कमलामाई नगरपालिकामा ७७ हजार जनसंख्या छ । मैले ती ७७ हजार जनसंख्याकै हित हुने काम गरेको छु । हामी निर्वाचित भएका मानिस पाँच वर्ष राम्ररी काममा लाग्ने हो भने ५ वर्षमा यो मुलुक बेग्लै हुन्छ । त्यसकारण दुई तिहाइको नेकपा सरकारले पाँच वर्षसम्म तपाईहरु पानी खाएर लाग्नुस् भनेर निर्देशन दिने हो भने हामी जनप्रतिनिहरु त्यो काम गर्न तयार छौं र मुलुक पनि अगाडी बढ्छ ।
प्रश्नः आगामी योजनाहरु के–के छन् ?
– मैले आगामी दिनमा यस नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन र नगरपालिकाको भविष्य उज्ज्वल बनाउन काम गर्नेछु । मैले निर्वाचनमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका देशभर चिनाउँछु भनेको थिएँ । त्यो काम मैले गरेर देखाएँ । म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला नै सिन्धुलीगढी बन्नु पर्दथ्यो तर, मेरो अवसर पनि हो यो । कसैले नबनाएको कारण मेरो पालो आएको छ । सिन्धुली गढीमा नेपाली सेनाले युद्ध संग्राहलय बनाउन टेण्डर भइसक्यो । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्टाइसकेको छ ।
नगरपालिकाले मजदुर स्वास्थ्य बीमा भन्ने योजना ल्याएको छ । त्यसको लागि ८ सय मजदुरको बीमा हुन्छ । जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुनु पर्दछ । यस नगरपालिकामा ८ सय मजदुर होईन २ हजारदेखि ३ हजारसम्मको मजदुरको स्वास्थ्य बीमा हुनु पर्दछ । उनीहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अहिले गाउँमा कुकुरले टोक्यो, गर्भवती महिलाको सुत्केरी गर्नु पर्यो भने सदरमुकाम आउनुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर हामीले गाउँमै स्वास्थ्य चौकी स्थापनामा जोड दिएका
नगरपालिकाभित्रका चार वटा वडामा अहिले नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण हुँदैछ । यी चार वटा लगायत सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नम्वर वान नगरपालिकाको घोषणा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अहिलेको यो शिक्षा अलि अव्यवहारिक भयो । आगामी दिनमा यो शिक्षा अलि व्यवहारिक र संस्कार बोकेको शिक्षा हुनु पर्दछ । नेपाल एउटा व्यवहार र संस्कार–संस्कृति बोकेको देश हो । तर, यो देशमा पढेको जति सबै विदेश जान्छन् । तर, संस्कार, व्यवहारिक र नैतिकजस्तो शिक्षा अबको लागि आवश्यक छ । त्यो शिक्षालाई जोडेर व्यवहारिक शिक्षा बनाउनुपर्दछ । किसानलाई उत्पादनमा लगाउने तर कृषि उत्पादनको बजारीकरण नहुने देखिन्छ । अब किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सरकारले किन्नुपर्छ । फाल्नैपरे पनि सरकारले किनेर फाल्नुपर्छ ।
मेरो मान्यता भनेको अब कमलामाई नगरपालिकालाई शिक्षाको हब बनाउनुपर्छ भन्ने हो । हामी निर्वाचित भएर आएपछि ३ वर्षे फरेष्टी, ३ वर्षे सर्भे इन्जिनियरिङ, ३ वर्षे कृषिको जेटियो, भेटनरी आएको छ । यसले गर्दा यस नगरपालिका शिक्षाको हब बन्दैछ । शिक्षामा यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
कमलामाई नगरपालिकालाई जोड्ने विभिन्न खोलानालाहरुमा बन्ने पुल, पुलेसाहरुको डीपीआर भइरहेको छ । आगामी दिनमा यस कमलामाई नगरपालिकाको एउटै मुख्य योजना छ, त्यो हो पर्यटक । यस नगरपालिकामा मुख्य पर्यटक भित्र्याउने ठाउँ भनेको सिन्धुलीगढी हो । यो गढीको व्यवस्थापन हामीले गर्दैछौँ र यस गढीको लागि हामीले अहिले होमस्टे संचालन गरेका छौँ । म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले कमलामाई नगरपालिकामा होमस्टेको जरुरत छ भन्ने मेरो घोषणा पत्रमा थियो ।
हामी घोषणापत्रमा आधारित रहेर जनताको लागि नगरिनहुने काम गर्न तल्लिन भइरहेका छौँ । यस कार्यमा सबैको सहयोग पाइरहेकै छौँ । भोलिका दिनमा पनि आम नगरवासी सबैको सहयोग पाउने अपेक्षा मेरो छ ।